Donald Trump: qorshaha siyaasadda arrimaha dibada ee Hillary Clinton waxay bilaabi doontaa Dagaalka Saddexaad ee Aduunka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldDonald Trump: qorshaha siyaasadda arrimaha dibada ee Hillary Clinton waxay bilaabi doontaa Dagaalka Saddexaad ee Aduunka
Donald Trump: qorshaha siyaasadda arrimaha dibada ee Hillary Clinton waxay bilaabi doontaa Dagaalka Saddexaad ee Aduunka
October 26, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Murashaxa xisbiga Jamhuuriga Donald Trump. [Sawirka: AP]
Washington-(Puntland Mirror) Murashaxa xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa sheegay in qorshaha siyaasada Hillary Clinton ee gudaha dalka Suuriya uu sababi karo Dagaalka Saddexaad ee Aduunka.
Waxaa uu sheegay in Maraykanka uu diirada saaro garaacida waxa loogu yeero ISIS halka uu ka door bidayo in madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad uu xilka ka dego.
“Waxaad doonaysaa in aad ku dhamaysid Dagaalka Saddexaad ee Aduunka dusha Suuriya haddii aanu dhageysano Hillary Clinton,” ayuu yiri Mr Trump.
Mrs Clinton ayaa soo jeedinaysa in hawada Suuriya laga sameeyo aag ka caagan duulimaadyada, taasoo dadka qaar ay leeyihiin waxay colaad ku keeni kartaa diyaaradaha Ruushka.
Mr Trump ayaa sidoo kale weeraray xisbiga Jamhuuriga isaga oo sheegay in aysan u midaysnayn musharaxnimadiisa.
“Haddii aanu haysano xisbi midaysan, ma lumin doono doorashadaan,” ayuu Trump u sheegay wakaalada wararka Reuters.
August 11, 2016 Donald Trump oo ku eedeeyay Obama inuu yahay ‘asaasaha ISIS’
January 4, 2017 Hillary Clinton oo ka qeybgali doonta caleemosaarka madaxweynaha la doortay ee Donald Trump
Al-Shabab seizes Tiyeglow town after Ethiopian troops pull out
US president Barack Obama will miss Muhammad Ali’s funeral on Friday due to a clash with his daughter’s high school graduation. Obama and his wife Michelle will be in Washington for their daughter Malia’s ceremony, [...]
Madaxweynaha Puntland oo Itoobiya u safray markii labaad bil gudaheed
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Khamiis ah u safray dalka Itoobiya, sida ay sheegeen ilo-wareedyadu. Ujeedada safarka madaxweynaha ayaan cadayn, balse ilo-wareedyo dowladda katirsan ayaa warsidaha Puntland Mirror u [...]